Daawo: Muxuu Cabdirashiid Janan ka yiri doorashadii laga wareejiyey Garbahaarey? - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Muxuu Cabdirashiid Janan ka yiri doorashadii laga wareejiyey Garbahaarey?
Daawo: Muxuu Cabdirashiid Janan ka yiri doorashadii laga wareejiyey Garbahaarey?
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa si lama filaan ah uga hadlay go’aankii uu guddiga doorashadad heer Federaal uu magaalada Ceelwaaq ugu wareejiyay doorashada kuraastii taalay magaalada Garbahaareey.
Cabdierashiid Janan ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo iyo hay’adda Nabad-Sugida inay cuuryaamiyeen gobolka Gedo, isagoo sheegay in danahooda gaarka ah u dhibaateeyeen masiirka reer Gedo.
Janan ayaa intaas kusoo daray inay quus taagan yihiin cid kasta oo isku dayaysay inay masiirka gobolka Gedo looga taliyo Villada, sida uu yiri.
Halkaan hoose ka daawo wareysiga Janan oo dhameystiran